Gabadh Soomaaliyeed Oo U Tartameysa Qofka Sannadka! | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Gabadh Soomaaliyeed Oo U Tartameysa Qofka Sannadka!
Gabadh Soomaaliyeed Oo U Tartameysa Qofka Sannadka!
Shabakada TIME oo ka mid ah wargeysyada caalamka ugu faca weyn isla markaana bixisa abaalmarino sannadle qaali ah oo ay kamid yihiin DUMARKA DUNIDA BADELAYA (The Firsts) iyo abaal marinta aadka loogu tartamo ee PERSON OF THE YEAR (Shaqsiga Sannadka).
Waxaa la sameeyay is reereebka abaalmarinta dumarka dunida badelaya waxaana ku tartamaya:
1. Ilhan Omar: sharci yaqaan golaha wakiilada ku matala Minnesota waana qof ki ugu horeeyay ee Somali ah xilkaas qabta isla markaana qofki ugu horeeyay ee Majalada TIME ay magacaawdo. Ilhan waxa ay waqti badan ku bixisaa Horumarinta Arimaha Bulshada.
2. Hillary Rotham Clinton: marwada koowaad ee madaxweyne Bill Clinton, Agaasimaha Hey’ada Horumarinta Haweenka ee Qaramada Midoobe 1995, Xogyihi Arimaha Dibada ee Hore, Musharax Madaxweyne 2016. Hillary waxa ay u ololeysaa awoodsiinta dumarka iyo arimaha qoyska.
3. Oprah Winferey: Martigeliye barnaamij TV, dhiirigaliye nololeed, Haweeneyda ugu taajirsan dumarka madow, milkiilaha shabakada Oprah Winferey Network (OWN) mid kamida shaqsiyaadka dunida loogu jecel yahay. Waxa ay inta badan waqti gelisaa soo nooleynta shaqsiyaadka nolosha ka niyad jabay.
4. Serena Williams: Cayaarhanka kaalinta kowaad ka galay Tennis, waxa ay ku guuleysatay in ka badan 7jeer (Wimbledon Slams) iyo abaalmarino kale oo kala duwan, 2002 ilaa hadda jiirooni kasta oo la qabto abaalmarinada ma seereyso. Waxa ay leedahay deeq bixiye caawiya qaarada Africa.
5. Selena Gomez: fanaanad da’ yar oo shaashadaha kasoo muuqatay iyadoo 10sano jirta barnaamij television oo lagu magacaabo (Barny & Friends), mid kamida shaqsiyaadka ugu taageeraha badan barta Instagram, waxa ay ku guuleysatay abaalmarinta Grammy 2015, 4-ti sano ee u dambeeyay waxa ay soo gashay xulka boqolka hees ee Billboard 100. Waxa ay taakuleyn ka geysataa horumarinta fanka.
6. Ellen DeGeneres: martigaliye barnaamijka asbuuc laha ah ee Ellen Show, deeqbixiye qoraa, jilaa ku guuleysatay billada xornimada ee uu madaxweynaha mareykanka bixiyo.
7. Medeline Albright: siyaasi rug caddaa ah waxa ay soo ahayd xoghayaha Arimaha Dibada, Professor culuumta siyaasada waqti badan ka soo dhigeysay jaamacada Georgetown, Qoraaga buugii loogu gadashadanaa 2003, mid kamida dadka go’aamada masiiriga ah dib loogu celiyo. Waxa ay aad uga shaqeysay muujinta Awooda Dumarka.
8. Melinda Gates: gabadha uu dhalay milkiilaha shirkada Microsoft, shaqsi kamida kuwa ugu tabarucaada bini aadanimada badan, Agaasimaha Hindiseyaasha Teknoolajiyada ee Microsoft. Waxaa lagu naaneesaa naxriis badan waayo lacagaheeda ugu badan waxa ay ugu yaboohdaa dalalka tabaaleysan ee Africa iyo Bariga Dhexe. $40Billion oo deeq ah ayay bixisay sannad qura.
9. Eileen Collins: Duuliye, Cirbixiyeen dumar ah midii ugu horeysay ee la raaciyo dufacadii labaad ee Hey’ada Sahanka Meerayaasha ee Mareykanka (NASA) waa khabiir ku takhasusay is badelka cimilada iyo dabeecadaha dhulka. Waxa ay ku guuleysatay abaalmarino badan.
10. Issa Rae: Jilaa, Soosaare iyo gabadhi ugu horeysay ee soo saartay barnaamijka caanka ah laga daba dhacay ee Qulqulka Xiddiga, waxa ay astaan haldoor ah u noqotay gabdho badan oo iyada ku dayday waa arday wali barta maadada farshaxan isgaarsiinta sidoo kale waa Hollywood Celebrity iyo milkiilaha YouTube Channel ka ugu taageerada (Subscribe) badan.
Gabdhaha intaan waa ay ka badan yihiin wadarta tiradooda guud waa 46, mid kasta mida kale qisadeeda waa ay ka xiisa badan tahay; waxaan kusoo koobay 10ka loogu aqoonista badan yahay – dhammaantood guul ayaan u rajeynaa si gaara Ilhan Omar ayaan rabaa inay kaalinka koowaad gasho!
Waxaa Qoray: Liibaan Cabdi Jaamac